12 Nofember, maalinta Caalamiga ah ee “Pneumonia”, xanuun wali loo dhimanayo – Kasmo Newspaper
12 Nofember, maalinta Caalamiga ah ee “Pneumonia”, xanuun wali loo dhimanayo
Updated - November 12, 2017 3:53 pm GMT
London (Kasmo), Wali dunida dad badan ayaa u geeriyooda xanunka “Pneumonia” oo ah caabuq (infection) neef-mareka asiiba, dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka intaba; maanta oo kale, 12ka Nofember, waxay sannad kasta ka dhigantahay maalinta Caalamiga ah “World Pneumonia Day”.
“Pneumonia” ama “Polmonite” waa caabuq ku dhex samaysma bakteeriyo Virus ah ama qayb jirka ah oo marka uu uga gudbo sambada dhaliya xaalad caafimaad oo halis ah, waliba da’da korriimada ama kuwa habka difaaca jirkoodu daciifka yahay.
Warbixin dhowaan ka soo baxday Ururka Caafimaadka WHO waxay qiytaasaysaa in 16% geerida dhallaanku sabab u tahay caabuqaan, waxaa kale oo laakiin dhab ah in helitaanka tallaal buuxa oo ka hortagi kara xanuunkaan macnaheedu yahay ka hortagis dhab ah xaaladaha, xilli taariikhi ah oo lagu jiro ifafaalaha adkaysiga “Antibiotic-ga”.
Xogta la hayo waxaa ka muuqanaya sida xanuunkaani u dabargoynayo dadka, gaar ahaan Asiyada Koofureed, Afrikada Saxaraha ka hooseysa, India, Nigeria, Pakistan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo Itoobiya.
Carruurtu waxay u le’ataa sababo ay ka mid yihiin maqnaanshaha shabakad tallaal oo habboon iyo habka difaaca jirkooda oo ku daciifay nafaqa-darro ka timid caanaha naaska oo aan ku fillayn. Sidaa darteed nafaqa-darradu waxay sare u qaadaysaa 4 jeer halista geerida cudurkaan, marka loo eego ilmaha sida fiican u quuta.
Waxyaabaha badan ee xusidda mudan waxaan ka soo qaadaynaa gacmaha oo biyo iyo saabuun lagu mayro in ay noqon karto caado yarayn karta 25% faafista cudurkaan. Caabuquu wuxuu kale oo ku badanyahay qaybaha bukanka sida kuwa sigaarka caba, kuwa qaba xanuunnada neefta, wadnaha , kalyaha iyo beerka.
Dadka waayeelka ah, waxtar yarida shaqada difaaca jirka oo lagu daray hoos u-dhaca da’da la socota, bakteeriyaha “Pneumococcal” wuxuu mas’uul ka yahay 60% xanuunka Pneumonia, iyada oo 1 ka mid ah 3dii qofba aanu ogayn in loo dhiman karo.
Waxaa lagu talinayaa in la ogaado in Pneumonia la qaadi karo xilli kasta oo sannadka gudihiisa ah oo aan qaboobaha oo qur ah ahayn, marka uu ku soo dhuunto hargabka, sidaa darteedna habboontahay, mar kasta, qaadashada tallaalka.